अभिनेता भुवन केसी र जिया केसी लिभिङ टुगेदरमा छन् भन्ने हल्ला अब नौलो रहेन । केही वर्षदेखि यो चर्चित लभ बर्ड भुवनको पुरानो बानेश्वरस्थित घरमा बस्दै आएको बताइन्छ । भुवन र जियाले आफूहरूबीचको सम्बन्ध लुकाउन हदैसम्मको प्रयास गरें, तर त्यो सधैं सम्भव हुने कुरा थिएन ।
यद्यपि लिभिङ टुगेदर र प्रेमसम्बन्धका बारेमा न भुवन केही बोल्छन्, न जिया । गुपचुप रूपमा डेटिङमा रमाइरहेको यो जोडीको सम्बन्ध नेपाली फिल्मी बजारमा छताछुल्ल फैलिएको छ । साथी मात्र हौं भन्दै पन्छिने जिया र भुवनले देश–विदेशको भ्रमण सँगै गरे पनि किन आफ्नो सम्बन्धलाई साथीको नाम मात्र दिइरहेका छन्, त्यो उनीहरूलाई मात्र थाहा छ ।
चलचित्र ‘कृ’ को एउटा गीतको छायांकनका लागि स्कटल्यान्ड जाँदा भुवनले जियालाई पनि सगैं लगेका थिए । एयरपोर्टमा जियालाई केही समय लुकाउन खोजे पनि मिडियाले देखेपछि भुवनलेबाध्य भएर जियालाई आफूतिर ल्याएर सँगै तस्बिर खिचाए । यसअघि चलचित्र ड्रिम्सको छायांकनका बेला जिया पोखरा पुगेकी थिइन् ।
भुवन जियालाई लिएर चलचित्र क्याप्टेनको लोकेसन खोज्न सिक्किम पुगे । पछिल्ला घट-नाक्रमहरूबाट भुवन र जियाको सम्बन्ध कति नजिक छ, अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । मित्रता गाँसिएसँगै भुवन र जिया नेपालका धेरै ठाउँ पुगेका छन् ।
जियाको बढ्दो भूमिका- जिया भुवनको परिवारलाई आफ्नो हातमा लिन खोजिरहेकी छिन् । उनले भुवनपुत्र अनमोल केसीका लागि अभिनेत्री छनौट गर्नेदेखि मिडियासँग सम्बन्ध बनाउने कुरामा समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, चलचित्र ‘ड्रिम्स’ की अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई जियाले नै रोजेकी थिइन् । चलचित्र ‘क्याप्टेन’ का लागि दुई जना नव–अभिनेत्री उपासनासिंह ठकुरी तथा प्रियंका एमभी यी दुवै अभिनेत्री पनि जियाले नै खोजेकी हुन् ।
उहाँले चलचित्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुभयो र म तयार भएँ ।’ अर्की अभिनेत्री प्रियंकाको खोजी पनि जियाले नै गरेकी हुन् । जियासँग कुरा भएपछि प्रियंका यो टिमसँग जोडिएकी थिइन् ।
उमेरले ६० वर्ष नाघेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगर्ने भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम पनि छन् । केसी चलचित्रका सर्वा्धिक सफल कलाकारसमेत हुन् । उनी अभिनयमा पनि सफल छन् ।
उनले निर्माण गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । यद्यपि भुवन पारिवारिक हिसाबले भने असफल मानिन्छन् । अनमोल, विवेक र काजलका बुबा भुवनले जियालाई पारिवारिक रूपमा एकदमै नजिक बनाइसकेका छन् । दुई पटक श्रीमतीलाई रिझाउन नसकेका भुवनले अहिले जियालाई भने विवाह नै नगरी श्रीमतीजस्तै बनाएर मात्र किन राखेका होलान् ? भन्ने प्रश्नको रहस्य अहिलेसम्म रहस्यमै छ ।
विजया सम्बन्ध-विच्छेद गरी छोरा र छोरी लिएर अमेरिका गइन् । मागी विवाह नटिकेपछि भुवनले भागी बिहे गरे सुस्मिता बमजनसँग । विवाहपछि सुस्मिताले चलचित्रमा काम गरिन् । उनी पहिलो चलचित्रबाटै हिट भइन् ।
सुस्मिताले ‘करोडपति’ बाट डेब्यु गरेकी हुन् । भुवनसँगको विवाहपछि सुस्मिताले छोरा अनमोललाई जन्म दिइन् । सुस्मिताको व्यवसायिक जीवन राम्रो गतिमा अघि बढिरहेकै बेला भुवनसँग भने ठाकठुक पर्न थाल्यो । बिस्तारै उनीहरूको सम्ब-न्ध बि-ग्रँदै गयो ।
अन्ततस् उनीहरू कानुनी रूपमै अलग भए ।भुवनले दुईवटा विवाह नटिकेकै कारण तेस्रो विवाहप्रति अनिच्छा देखाएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनी जियालाई एकदमै मिल्ने साथीमा सीमित राख्न चाहन्छन् ।
‘बाहिर कस्तो हल्ला छ थाहा भएन, तर उहाँहरूको सम्बन्ध घनिष्ठ छ । यो सम्बन्ध लामो समयदेखि चलिरहेको छ । अब त्यो लि-भिङटुगे-दर हो कि मित्रता मात्र ? त्योचाहिँ उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।’
जियाले केही वर्षअघि नै भुवनलाई मन पराउँछु भनिसकेकी थिइन् । जिया र भुवननिकटका अर्का चलचित्रकर्मी भन्छन्, ‘बाहिर कस्तो हल्ला छ थाहा भएन, तर उहाँहरूको सम्बन्ध घनिष्ठ छ । यो सम्बन्ध लामो समयदेखि चलिरहेको छ । अब त्यो लि-भिङ टुगेद-र हो कि मित्रता मात्र ? त्योचाहिँ उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।’
दीपक श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र ‘हो यही माया हो’ बाट रंगीन संसारमा प्रवेश गरेकी हुन्— जिया केसी । झापाबाट अभिनेत्री बन्न काठमाडौं आएकी उक्त चलचित्रपछि एटिएम, ब-र्बाद, वाचा, रिङरोड, रङ वे आदि चलचित्रमा अभिनय गरिन् । पछिल्लो समय भने उनी चलचित्र अभिनयबाट लगभग अलगजस्तै छिन् ।
सुस्मिताले भुवन, अनमोल तथा जियाका बारेमा बोल्न भने छाडेकी छैनन् । उनी भुवन केसीको निकै चर्को आलो-चना गर्छिन् भने जियाका सम्बन्धमा पनि टीका–टिप्पणी गरिरहेकी हुन्छिन् । सुस्मिताले फेसबुकमा राख्ने स्टाटस मिडियाका लागि मसला भैरहेका छन् । यता भुवन सुस्मिताका बारेमा कुरा गर्न चाहँदैनन् । सदावहार नायक केसी भन्छन्, ‘उहाँका बारेमा कुरै नगरेको राम्रो । खै किन नचाहिने कुरा गरिरहनुभएको छ, थाहा छैन । बरु खुरु–खुरु आफ्नो काममा लागे हुन्थ्यो नि !’